အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဆိုတာဘာလဲ။ | Linux မှ
El အခမဲ့ဆော့ဝဲ (အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) တွင်အင်္ဂလိပ်စကားလုံးတွင်“ အခမဲ့” ဟူသောအသုံးအနှုန်း၏မရေရာမှုကြောင့်ဤနာမည်ကိုတစ်ခါတစ်ရံတွင်“ အခမဲ့” နှင့်ရောထွေးသော်လည်း“ အခမဲ့ဆော့ဖ်ဝဲ” ကိုလည်းသုံးသောကြောင့်) အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်ကိုလည်းအသုံးပြုသည်) ဆော့ဝဲ၏အမည်ဖြစ်သည် သုံးစွဲသူများ၏ ၀ ယ်ယူထားသောထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ လွတ်လပ်ခွင့်ရှိသည် အသုံး, ကူးယူထားသည်, လေ့လာခဲ့သည်, ပြုပြင်ထားသောနှင့် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေသည် လွတ်လပ်စွာ။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲဖောင်ဒေးရှင်း၏အဆိုအရအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အသုံးပြုသူများကိုလွတ်လပ်စွာ run ရန်၊ ကူးယူရန်၊ ဖြန့်ဝေရန်၊ လေ့လာရန်၊
အောက်ဖော်ပြပါအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီပါကဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအခမဲ့သတ်မှတ်သည်:
မီးမောင်းထိုးပြရန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည် အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ရှိပြီးသားဉာဏပစ္စည်းမူပိုင်ခွင့်ဥပဒေများကိုအခြေခံပြီး၊ အချို့သောအခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီလျှင်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်များကိုပေးသည်။ တနည်းအားဖြင့်၎င်းသည် software ကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်၊ ၎င်းသည်“ စီးပွားဖြစ်ဆော့ဖ်ဝဲ” ဟုလူသိများသောနေရာတွင်ယေဘူယျအားဖြင့်၎င်းပြုပြင်မှုများကိုကမ္ဘာတစ်ခွင်လုံးမှရရှိနိုင်စေရန်အခြေအနေနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ခွင့်ပြုသည်။ ဒါဟာငါတို့ရှိသမျှသည်မျှဝေလျှင်ငါတို့ရှိသမျှသည်ပိုကောင်းပါလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအပေါ်အခြေခံသည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွင်းတွင်လိုင်စင်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်:
GPL သည်လူသိအများဆုံးလိုင်စင်တစ်ခုမှာ GNU စီမံကိန်းမှဖြစ်သည်။
LGPL သည် GPL နှင့်ဆင်တူသော်လည်းခြားနားချက်မှာ၎င်းတွင်ရှိသည်
Creative Commons - အမှန်တကယ်တွင်၎င်းသည်ဂရပ်ဖစ်၊ စာသားသို့မဟုတ်တေးဂီတကဲ့သို့သောဖန်တီးမှုဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အသုံးပြုသောလိုင်စင်အမျိုးအစားများကိုလွှမ်းခြုံထားသည်။ ဒီလိုင်စင်အချို့ကိုအခမဲ့ဖြစ်သည်။
Open Software လည်းရှိတယ်, အဘယ်သူ၏အဓိကထပ်ကိန်း BSD လိုင်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ ပွင့်လင်းဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) သည်မည်သည့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုမှမရှိဘဲကုဒ်နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲများကိုပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်၊ သို့သော်တူညီသောအရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနိုင်မည်ဟုအာမမခံပါ။ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်အဓိကကွာခြားသည်။
1 အဘယ်အရာကိုစီးပွားဖြစ် software ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား?
3 အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဒဏ္ာရီများနှင့်ပိတ်ဆို့ထားသော (သို့) သီးသန့်ဆော့ဗ်ဝဲ
အဘယ်အရာကိုစီးပွားဖြစ် software ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစား?
စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ကိုဒါခေါ်ပြီးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်လူတစ် ဦး တစ်ယောက်ဟာသဘာဝကျကျရနိုင်မယ့်အခွင့်အရေးကိုဆုံးရှုံးစေလို့ပဲ။ စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်နောက်ဆုံးအသုံးပြုသူလိုင်စင်သဘောတူညီချက်ပါ ၀ င်သည်သို့မဟုတ် EULA ၏အင်္ဂလိပ်အတိုကောက်အတွက် ဤလိုင်စင်သည်သင်၏ software ကိုနည်းလမ်းများစွာဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ အဓိကတစ်ခုကတော့၎င်းသည်ယေဘုယျအားဖြင့်ပရိုဂရမ်အားပြင်ဆင်ခြင်းကိုတားမြစ်ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်ကိုကန့်သတ်ထားသည်။
စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုကိုပုံမှန်တပ်ဆင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ဤသည်မှာအတိအကျမဟုတ်သော်လည်းအဆင့်များမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
တစ်ခုက installer ကို run သည်။ (များသောအားဖြင့် .exe ဖိုင်ကိုနှစ်ချက်နှိပ်ပါ)
သက်ဆိုင်ရာဖိုင်များ install လုပ်နေကြသည်
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲနှင့်စီးပွားဖြစ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အကြားခြားနားချက်သည်အချက် (ဂ) တွင်လက်ခံသောလိုင်စင်ဖြစ်သည်။ ပရိုဂရမ်တစ်ခု၏စာချုပ်သည်၎င်းသည်အခမဲ့သို့မဟုတ်စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်ဟုတ်မဟုတ်ကိုပြသည်။ ထို့အပြင်စီးပွားဖြစ်ပရိုဂရမ်များတွင်အမျိုးအစားများစွာရှိသည်။
ငွေပေးချေမှုများ - သုံးစွဲသူများသည်၎င်းကိုရယူရန်နှင့်၎င်းတို့အားတရားဝင်အသုံးပြုရန်ငွေပမာဏကိုပေးရမည့် software ။ အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်အသုံးပြုခွင့်သည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိပြီးဆက်လက်သုံးစွဲနိုင်ရန်ထပ်မံပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။
Demos / Shareware - ဤပရိုဂရမ်မျိုးသည် Winzip သို့မဟုတ် Winrar ဖြစ်သည်။ ဒီပရိုဂရမ်များတွင် ၄ င်းတို့၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုရက်အနည်းငယ်အတွင်းကန့်သတ်ထားသည်။
အခမဲ့ - ၎င်းကိုအင်တာနက်မှအခမဲ့ဒေါင်းလုပ်ဆွဲ။ အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတွင်အခကြေးငွေပိုများသည့်အင်္ဂါရပ်များပါရှိသည်။ ယင်းတို့၏ဥပမာတစ်ခုမှာ Winamp ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျအားဖြင့် Proprietary Software ကိုလည်း Closed Software သို့မဟုတ် Proprietary Software ၏အမည်အောက်တွင်လူသိများသည်။ ပုဂ္ဂလိကသည် ပို၍ သင့်လျော်သောနာမည်ဖြစ်သည်၊ အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့မြင်ခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအခွင့်အရေးများဆုံးရှုံးစေသည်။
ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်သင့်အားဆဲလ်ဖုန်းကို“ နောက်ဆုံးအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်” ဖြင့်ရောင်းချပြီး၎င်းသည်ဖုန်းဝန်ဆောင်မှုကိုသင်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည့်အနည်းဆုံးသက်တမ်းနှင့်ထိုဆဲလ်ဖုန်းနှင့်သင်အသုံးပြုနိုင်သောလုပ်ဆောင်မှုများစသည့်အခြေအနေအချို့ကိုသင့်အားသက်ရောက်စေသည်။ ၎င်းကုမ္ပဏီသည်သင်၏ဆဲလ်ဖုန်းနှင့်မပြုလုပ်စေလိုသောအရာများသို့မဟုတ်သင်အားအပိုတောင်းရန်လိုသည့်အရာများပြုလုပ်ခြင်းကိုပိတ်ပင်ထားသည်။
ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်သင့်အားသင်၏ဆဲလ်ဖုန်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုစက်ကလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်ကုမ္ပဏီကသင့်အားအပို ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုအဖြစ်အားသွင်းရန် (သို့) သင့်အား ပို၍ စျေးကြီးသောပစ္စည်းကိုရောင်းချရန်အတုတားမြစ်ထားသည်။ ပြီးတော့သူတို့ကသင့်ရဲ့ဆဲလ်ဖုန်းကိုပြောင်းလဲပစ်ဖို့တောင်ဖိအားပေးတယ်၊ အုတ်တွေလိုအဖြစ်အပျက်တွေလိုကုမ္ပဏီတွေဟာခေတ်မမီတော့တဲ့ဆဲလ်ဖုန်းအမျိုးအစားတစ်ခုအတွက်ဝန်ဆောင်မှုကိုသူတို့မလိုချင်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကသင့်ကိုဆဲလ်ဖုန်းကိုပြောင်းပစ်ခိုင်းပြီးနောက်ထပ်ဝယ်လိုက်တယ်။
ပြီးတော့သင့်မှာဆဲလ်ဖုန်းနဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုဆော့ (ဖ်) ဝဲဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းအတွက်သင့်ကိုအားသွင်းနေတဲ့ဖုန်းထုတ်လုပ်သူတွေရှိတယ်၊ ဒီနေ့ခေတ်လူကြိုက်များတဲ့ဆဲလ်ဖုန်းမှာလိုပဲ။ ပြီးတော့အာမခံကသက်တမ်းကုန်သွားရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်သင်ကဝက်အူတစ်လုံးကိုထိလိုက်ရင်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကဘက်ထရီပြောင်းတာကိုအားသွင်းဖို့ကြိုးစားတယ်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်၌အခမဲ့ဆဲလ်ဖုန်းရှိသည်။ ဆဲလ်ဖုန်းအစီအစဉ်များသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ ထို့ကြောင့်ပြcasesနာများပေါ်ပေါက်လာသောပြsolveနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်ကူညီပေးနိုင်သည့်လူများရှိကြသည်။ ဥပမာအားဖြင့်ပါဂွန်နီယာပြည်နယ်ရှိသစ်တောအလယ်ရှိဆဲလ်ဖုန်းအသုံးပြုခြင်း၊ သာမန်ထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး အနေဖြင့်အတိအကျကတည်းကအာရုံမစိုက်နိုင်သည့်အရာ မင်းရဲ့နယ်ပယ်
ပြီးတော့သင်ကပရိုဂရမ်များနှင့်ဂိမ်းများကိုသင်၏ကွန်ပျူတာနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစည်းရုံးရေးမှူးအတွက်တီထွင်ထားသောအခြားသူနှင့်၎င်းဆဲလ်ဖုန်းနှင့်လည်းအလုပ်လုပ်ရန်ဆော့ဖ်ဝဲဖြင့် ချိတ်ဆက်၍ တပ်ဆင်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုသင်စက္ကန့်တိုင်း x စက္ကန့်တိုင်းဓါတ်ပုံများပေးပို့။ ပုံမှန်ကွန်ယက်တစ်ခုတွင် pseudo teleconference ကိုကိုင်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုထားသောဆဲလ်ဖုန်းကဲ့သို့သောထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီကထင်ထားသည့်အရာအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ ဝန်ဆောင်မှု သိုမဟုတ်ဆော့ဗ်ဝဲအားလုံးကိုသင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သင်သုံးသောတူညီသောအရာအတွက်လုံးလုံးပြောင်းပါ။ ဤသို့မဟုတ်သောတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီမှပေးသောရွေးချယ်စရာများနှင့်မတူပါ။ အကယ်၍ သင်ကတယ်လီဖုန်းကုမ္ပဏီကိုမကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်း၊ မက်ဆေ့ခ်ျ (သို့) သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာပေါ်မူတည်ပြီးသင်တစ် ဦး ကိုတစ် ဦး အပြန်အလှန်လိုသလိုပြောင်းလဲနိုင်ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာတစ်ပြိုင်နက်တည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။ တစ်နည်းပြောရရင်ဆဲလ်ဖုန်းကသင်လိုချင်တာကိုလုပ်တယ်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကသင့်အားဘယ်သောအခါမှမယူဆောင်လာသင့်သောအခွင့်အရေးများကိုပြန်ပေးရန်ကြိုးစားသည်။ အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးမျှဝေပါကကျွန်ုပ်တို့အားလုံးပိုကောင်းလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်သည်။ ၎င်းသည် utopia ကဲ့သို့ဖြစ်သော်လည်းမြင်သာသောအရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်ပင်သတိမထားမိဘဲသင့်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်ဖြစ်ပျက်နေသည်။
အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဒဏ္ာရီများနှင့်ပိတ်ဆို့ထားသော (သို့) သီးသန့်ဆော့ဗ်ဝဲ
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုအပျော်တမ်းသမားများကပြုလုပ်သည်၊ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်ဆော့ဝဲလ်ထက်အရည်အသွေးညံ့သည်
အတု - ဒေသအားလုံး၌ကဲ့သို့အရည်အသွေးသည်ကွဲပြားသော်လည်းအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲသည်လူအများအားကုဒ်ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်တိုးတက်မှုများကိုတင်ပြရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဤသို့သောစိစစ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းသည်အချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်ထောင်နှင့်ချီသောလူများကဆော့ဖ်ဝဲ၏အရည်အသွေးကိုစီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်နှင့်ဆင်တူသည်သို့မဟုတ်ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ ဤလူအများစုပင်ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကုမ္ပဏီများတွင်ပုံမှန်အလုပ်လုပ်ကြသည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်
အတု - အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲ - အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည် "လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၊ အခမဲ့ဘီယာကဲ့သို့မဟုတ်" မှဆင်းသက်လာသည်။ ဘာသာပြန်ချက်မှာ "လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိသကဲ့သို့လွတ်လပ်သောဘီယာကဲ့သို့မဟုတ်" ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်“ free” ဟူသောစကားလုံး၏မရေရာသောကြောင့်၎င်းသည်အင်္ဂလိပ်စကားပြောသူများအတွက်ပိုမိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေသည့်ပြတ်ပြတ်သားသားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲအများစုသည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလိုင်စင်ကို ၀ ယ်ယူပြီးသည့်အခါ၊ လိုင်စင်အခြေအနေများနှင့်ကိုက်ညီပါကဆော့ဝဲကိုအခမဲ့ကူးယူနိုင်သည်။
အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲမှာဘယ်သူမှငွေမရှာကြဘူး
အတု - မဟုတ်ပါကဥပမာအားဖြင့်မကြာသေးမီက Sun Microsystems မှဝယ်ယူခဲ့သော MySql ကဲ့သို့သောအခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကုမ္ပဏီအချို့၏ဝယ်ယူမှုကိုမည်သို့တရားမျှတလိမ့်မည်နည်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်တွင်အခမဲ့ဆော့ (ဖ်) ဝဲကိုဖန်တီးပြီး ၀ င်ငွေရရှိသောကုမ္ပဏီများသည်ပရိုဂရမ်ကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘဲအထောက်အပံ့နှင့်ထုံးစံဖွံ့ဖြိုးရေး ၀ န်ဆောင်မှုများလည်းရှိသည်။
လိုင်စင်ဆိုသည်မှာဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) ရေးသားသူသည်အသုံးပြုသူအား“ ဥပဒေကြောင်းအရအသုံးချမှု” ကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုသည့်သဘောတူညီချက်ဖြစ်သည်။ အခမဲ့လိုင်စင်များအနက်အများဆုံးလူသိများကြသည်:
GPL (GNU အထွေထွေပြည်သူ့လိုင်စင်) လိုင်စင်ဖြင့်စာရေးသူသည်ပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးဆော့ဖ်ဝဲ၏ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းအားလုံးသည် GNU GPL ၏ပိုမိုတင်းကျပ်သောစည်းကမ်းချက်များအောက်တွင်ရှိနေစေရန်သေချာစေရန်ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသည့်အတိုင်းပိုင်ဆိုင်မှုအခွင့်အရေးကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားပြီးပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်ခြင်းများကိုခွင့်ပြုသည်။
အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်အဖြစ်လိုင်စင်ရဆော့ဖ်ဝဲ၏ခန့်မှန်းခြေ ၆၀% သည် GPL လိုင်စင်ကိုအသုံးပြုသည်။ ဤလိုင်စင်ကိုကန့်သတ်ခြင်း - ပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောပြန်လည်ပြုပြင်ထားသောမူကွဲများမူရင်းမူရင်းသည် GPL လိုင်စင်အောက်တွင်ရှိသည်။ တစ်နည်းပြောရလျှင် source code ကိုဖတ်လိုသူနှင့် / သို့မဟုတ်ပြုပြင်လိုသောမည်သူ့ကိုမဆိုတံခါးဖွင့်ထားသင့်သည်။ ၎င်းကိုမပိတ်သင့်ပါ။ အဆုံးစွန်သောအမှု၌, လိုင်စင်ချိုးဖောက်လိမ့်မည်။
BSD လိုင်စင်သည် BSD (Berkeley Software Distribution) စနစ်များအတွက်အဓိကခွင့်ပြုထားသော software လိုင်စင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Open Software လိုင်စင်ရအုပ်စုနှင့် GPL မှအဓိကခြားနားချက်မှာကန့်သတ်ချက်များနည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။ BSD လိုင်စင်၏ထူးခြားချက်တစ်ခုမှာ၎င်းသည် GPL နှင့်ဆန့်ကျင်။ ဆော့ (ဖ်) ဝဲအတွင်းရှိအရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုအသုံးပြုခွင့်ပြုသည်။
La licencia MPL (Licencia Pública de Mozilla en español o Mozilla Public License en inglés) es una licencia de código abierto y Software Libre. Fue desarrollada por Netscape Communications Corporation, para liberaraNetscape Communicator XNUMX, que más tarde se convertiría en el ya conocido y popular proyecto Mozilla. La licencia MPL cumple completamente con la definición de software de código abierto y con las cuatro libertades del Software Libre. Sin embargo la MPL deja abierto el caminoauna posible reutilización no libre del software sin restringir la reutilización del código ni el relicenciamiento bajo la misma licencia.
လက်ရှိတွင်အခြေခံအုတ်မြစ်တစ်ခုရှိသည် အခမဲ့ဆော့ဝဲဖောင်ဒေးရှင်း (FSF)လိုင်စင်သည်အခမဲ့လား၊ မဟုတ်သည်ကိုညွှန်ပြသည့်အရာဖြစ်သည်။ အခမဲ့လိုင်စင်များအားလုံးကိုကြည့်ရှုရန်၊ https://www.gnu.org/licenses/license-list.html
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » FileLet ရဲ့ UseLinux » အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဆိုတာဘာလဲ။
*“ လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခြင်း၊ အခမဲ့ဘီယာတွင်ကဲ့သို့လွတ်လပ်ခြင်း” ၏မှန်ကန်သောဘာသာပြန်ဆိုခြင်းသည်“ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ရှိသကဲ့သို့လွတ်လပ်သောဘီယာကဲ့သို့” မဟုတ်ပါ။ စပိန်ဘာသာတွင်အင်္ဂလိပ်၌ဖြစ်ပျက်သောအမှားမရှိပါ။ အခမဲ့ "အခမဲ့" နှင့်နှစ် ဦး စလုံးဆိုလိုနိုင်ပါတယ် "အခမဲ့။ "
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်! အင်္ဂလိပ်ဘာသာတွင်«အခမဲ့»ဟူသောစကားလုံး၏«မရေရာဒွိဟ»နှင့်ပတ်သက်သောမှတ်ချက်ကိုတည့်မတ်ပေးခဲ့သည်။ ဒါဟာလုံးဝမှန်သည်။ ရွှင်လန်း!
ရပါတယ်! အခါအားလျော်စွာတစ်ခုခုထည့်ရတာကောင်းပါတယ်။ ဆောင်ပုဒ်ကိုဆက်လက်, အခမဲ့ "ထက်ပိုမိုတောင်းဆိုမှုများသည်ထင်, ငါထင်ပါတယ်။ တန်ပြန်ဥပမာတစ်ခုအနေဖြင့် - Internet Explorer သို့မဟုတ် Windows Live Messenger သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်အခမဲ့ဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန် el လိဟု mendez nuñez ဟုသူကပြောသည်
အသုံးပြုသူသည် source code ကိုမကြာခဏပြောင်းလဲခြင်းသည်၎င်းကိုမထိခိုက်ပါ။
အခြားအသုံးပြုသူတစ် ဦး ကမနှစ်သက်ပါကသူသည်ဖြစ်နိုင်သည့်အချိန်တိုင်းတွင်အရင်းအမြစ်ကုဒ်ပြောင်းရန်အငြင်းပွားမှုအချို့ကိုသူမမြင်နိုင်ပါ။
စီးပွားဖြစ်ဆော့ဝဲလ်ဖြစ်ပါကအရင်းအမြစ်ကုဒ်ကိုသင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်မထည့်သွင်းနိုင်လျှင်ပွင့်လင်းသော software ရှိခြင်းကဘာလဲ
ခရစ်ယာန်ဘာသာမှ elihu mendez nuñezအားစာပို့ပါ
ဘာသာစကားကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုခြင်း။ သူတို့ရေးသား / ရေးသားသည် - «ပုံမှန်အားဖြင့်»၎င်းမှ: « ORIGIN FROM »။
Karen Marin ဟုသူကပြောသည်
karen marin သို့ပြန်သွားရန်
adrii castilla ဟုသူကပြောသည်
အလွန်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတာဝန် linux ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်
adrii castilla မှစာပြန်ရန်
Andrea အဲလစ်ဇဘက် Carvajal Basto ဟုသူကပြောသည်
အလွန်ကောင်းသောသတင်းအချက်အလက်! အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုကုမ္ပဏီများကပိုမိုအသုံးပြုခြင်းကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာသောပြconsideringနာကိုစဉ်းစားခြင်းမှာသံသယတစ်ခုမှာအသေးစားနှင့်အလတ်စားလုပ်ငန်းများ (အငယ်စားနှင့်အလတ်စားကုမ္ပဏီများ) သည်ပွင့်လင်းပြီးပိတ်ထားသောဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) အစားအခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အခမဲ့တည်နေရာများနှင့်ဥပမာအားဖြင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှအကူအညီအဖြစ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
Andrea Elizabeth Carvajal Basto အားပြန်ပြောပါ
Para completar un poco la información de la página y ciertas dudas que me quedaronami. Me decidíainvestigar un poco y encontré en la página de Geekno, que la diferencia entre el código abierto y el libre es que en el caso del software libre, no solo se puede acceder al código fuente, sino que también es posible modificarlo, distribuirloeincluso comercializar las modificaciones, siempre y cuando adjuntemos el trabajo original con su correspondiente licencia libre. En cambio, el software de código abierto puede no permitir la comercialización ni siquiera de las modificaciones sobre el código, o simplemente la distribución de dichas alteraciones. (M Blanco, XNUMX).
၁။ Linux Ubuntu
2 ။ LibreOffice
4 ။ Inkscape
၅။ Mozilla FireFox
ComputerHoy စာမျက်နှာအရ၊ ပွင့်လင်းတဲ့အရင်းအမြစ်ပရိုဂရမ်တချို့ကတော့ -
3 ။ Mozilla Thunderbird
4 ။ FileZilla
၈ ။ PeaZip